လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာရေးသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၁၀)ချက် - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on October 17, 2013 at 14:45 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မေးခွန်း = ထိရောက်တဲ့ အီးမေး(လ်)များ၊ ပေးစာများ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် အဆိုပြုချက်များ ရေးသားနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများပါလဲ?
အဖြေ = အင်း၊ အဲဒါကတော့ C လေးလုံးကို လိုက်နာရုံပါပဲ။
Be clear (ရှင်းရှင်းလင်းလင်း)ဖြစ်ပါစေ။
Be concise (ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်)ဖြစ်ပါစေ။
Be considerate (စာနာထောက်ထားပါ)နှင့်
Be correct (အမှားကင်း)ပါစေ။
အမေး = တကယ်ပဲ အဲဒီလောက်တောင် ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူပါလား?
အဖြေ = အင်း - တကယ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀လိုပါပဲ။ စာရေးသားခြင်းကလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ရှုပ်ထွေးတယ်။ အလိုမကျဖြစ်ရတယ်။ ခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စာရေးသားတဲ့ ဘ၀ကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါနည်းများဖြင့် ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာကို တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စာရေးခြင်းအလုပ် လုပ်နေသူများ အတွက် လျင်မြန်တဲ့တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၁၀) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. စာဖတ်သူများရဲ့အမြင်ဖြင့်ကြည့်ပါ (Adopt the 'you' attitude)
ဆိုလိုတာကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စာဖတ်သူများရဲ့အမြင် ဘက်ကနေ ကြည့်ပါ။ သူတို့ ဘာကို သိလိုတယ်၊ ဘာကို သိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အလေးထားပါ။
DraftးI have requested that your order be sent out today. (ခင်ဗျားရဲ့ အမှာစာကို ဒီနေ့ပဲ ပို့ပေးဖို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုထားပါတယ်။)
CorrectionးYou will receive your order by Wednesday. (ခင်ဗျားရဲ့ အမှာစာကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရမှာပါ။)
၂. တကယ့်ကတ္တား (Subject) ကို အာရုံထားပါ။ (Focus on the real subject)
အားနည်းသော ကတ္တား (weak subject)နောက်က လိုက်တဲ့ စကားစုထဲသို့ အဓိကကျသော စကားလုံးတစ်လုံးကို ထည့်ရေးခြင်းဖြင့် မမြှုပ်ပစ်ပါနှင့်။
Draft : The implementation of the new marketing campaign will begin on June 1. (ဈေးကွက် တင်ရောင်းချမှုရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအသစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Correction : The new marketing campaign will begin on June 1. (ဈေးကွက်တင်ရောင်းချခြင်း၊ စစ်ဆင်ရေး အသစ်ကို ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့မှာ စပါမယ်။)
၃. ခံရခြင်းပြကြိယာပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ပြုလုပ်ခြင်းကြိယာပုံစံကို အသုံးပြုပြီး ရေးပါ။ (Write actively, not passively)
ဆီလျော်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ဝါကျတွင် ကတ္တားကို ရှေ့မှာထားပြီး ၄င်းကို တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ခိုင်းပါ။ Active voice ကို အသုံးပြုခြင်းသည် passive voice သုံးခြင်းထက်ပို၍ ထိရောက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄င်းဟာ ပိုပြီး တိုက်ရိုက်ကျတယ်။ ပိုပြီး ကျစ်လစ်တယ်။ ပြီးတော့ နားလည်ဖို့ ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူတယ်။ (ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါ။)
Draft : Your proposal was reviewed at our meeting on April 1, and it was immediately submitted to the developers. (ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ခင်ဗျားရဲ့ အဆိုပြုချက်ဟာ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းခံရပြီးတော့ ချက်ချင်းပဲ ထုတ်လုပ်သူတွေထံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။)
Correction: We reviewed your proposal on April 1 and immediately submitted it to the developers.
(ခင်ဗျားရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြန်စစ်ဆေးပြီး ချက်ချင်းပဲ ထုတ်လုပ်သူတွေထံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။)
၄. စကားလုံးနှင့် စကားစုအပိုများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ပါ။ (Cut unnecessary words and phrases)
စကားလုံးများ စုပြုံနေသော အသုံးအနှုန်းများသည် စာဖတ်သူတွေကို အာရုံပြားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည့်သိပ် ရှုပ်ပွနေတာတွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ပါ။
Draft : I am writing this note because I want to thank you very much for organizing the open house that was held last Thursday. (ကျွန်မ ဒီစာကို ရေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မည်သူမဆို လာရောက်လေ့လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေ (open house)ကို စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ကြောင်း ပြောချင်လို့ပါ။)
Correction : Thank you very much for organizing last Thursday’s open house. (ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က open house ကို စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
၅. ဒါပေမဲ့ အဓိကစာလုံးများ မချန်ခဲ့ပါနှင့်။ (But don’t leave out key words)
မိမိရဲ့ အရေးအသားဟာ ရှင်းလင်းပြီး ကျစ်လစ်ဖို့ဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံး (သို့) နှစ်လုံး ဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Draft : The storage shed is the first step. (သိုလှောင်ရုံကတော့ ပထမ အဆင့်ပါပဲ။)
Correction: Unlocking the storage shed is the first step. (သိုလှောင်ရုံကို ဖွင့်ခြင်းကတော့ ပထမအဆင့်ပါပဲ။)
၆. ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးဖို့ရာ မမေ့ပါနှင့်။ (And don’t forget your manners)
ဒီနေရာမှာတော့ ရှေ့က ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ စာနာထောက်ထားပါ (be considerate) ဆိုတဲ့ အချက်ပါလာပါပြီ။ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ “ကျေးဇူးပြုပြီး” (please)နဲ့ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”(thank you)ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ထည့်ပြောရင် သင့်ရဲ့ e-mail ထဲမှာလည်း ဒီစကားလုံးတွေကို ထည့်သုံးသင့်ပါတယ်။
Draft : Send me the jargon report before you head home. (ခင်ဗျား မပြန်ခင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရ အစီရင်ခံစာကို ကျွန်တော့်ဆီ ပို့လိုက်ပါ။)
Correction: Please send me the jargon report before you head home. (ခင်ဗျား မပြန်ခင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရ အစီရင်ခံစာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ပို့ပေးပါ။)
၇. ခေတ်မမီတော့တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို ရှောင်ရှားပါ။ (Avoid outdated expressions)
မိမိရေးသားတဲ့ စာများကတစ်ဆင့် သင်ဟာ ရှေးဆန်ပြီး တည်ကြည်လေးနက်လွန်းသူရယ် လို့ အထင်မခံချင်ရင် စကားပြောရာတွင် ဘယ်သောအခါမှ အသုံးမပြုသည့် အသုံးအနှုန်းများဖြစ်သော “Attached herewith” (ဤစာနှင့်အတူ ပူးတွဲ) “this is to advise you” (ဤ(စာ)သည် သင့်အား အကြံပြုရန်) “as per your request” (ဆုံးဖြတ်ထားသော သင်၏ တောင်းဆိုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍) တို့ကို ရှောင်ပါ။
Draft : Attached herein for your reference isaduplicated version of the aforementioned deed.
(သင့်အနေဖြင့် ရည်ညွှန်းနိုင်ရန်အတွက် ရှေ့ဖော်ပြပါ စာချုပ်၏ မိတ္တူတစ်စောင်ကို ဤစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့လိုက်ပါသည်။)
Correction: I have enclosedacopy of the deed. (စာချုပ်၏ မိတ္တူတစ်စောင်ကို အတူထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
၈. ပေါ်ပင် စကားလုံးများသုံးခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ။ (Putacap on buzzwords)
လောလောဆယ် ခေတ်ဆန်ပြီး ရေပန်းစားသော စကားလုံးများကို လူတွေရဲ့ ကြိုဆိုလက်ခံမှုသည် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ပျက် သွားပါတယ်။
Draft : At the end of the day the bottom line is that we should facilitate opportunities for-employees to provide input on best practices. (အရာရာကို စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက် လက်ခံလိုက်ရတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို စံထားလောက်ပြီး တခြားကုမ္ပဏီတွေကပါ အတုယူလောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေ ပိုပြီးကောင်းလာဖို့ အတွက် မိမိမှာရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဗဟုသုတတွေ ပေးနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးတွေရအောင် ကူညီရမယ်ဆိုတာပါပဲ။)
Correction: Let’s encourage people to make suggestion. (လူတွေကို အကြံပေးနိုင်အောင် အားပေးကြပါစို့)
၉. သင့်ရဲ့ အထူးပြုစကားလုံးပုံတွေကို ဖြိုချပါ။ (Unstack your modifiers)
Stacking ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နာမ်တစ်ခုရဲ့ အရှေ့မှာ အထူးပြုစကားလုံးတွေကို စုပုံထားခြင်းပါပဲ။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သဘောတရားအတူတူပါပဲ။ နာမ်တန်းရှည်ကြီးကတော့ စကားလုံး တစ်လုံး (သို့) နှစ်လုံးသက်သာစေပေမဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုတော့ ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။
Draft : Space telescope wide-field planetary camera instrument definition team ground based charged-couple-device camera. (from New Scientist, cited by Mathew Lindsay Stevens in Subtleties of Scientific Style, 2007.
(Subtleties of Scientific Style, 2007 ထဲက New Scientist မှ Mathew Lindsay Stevens က ကောက်နှုတ် ကိုးကားပြပါသည်။)
Correction: Huh? (ဟင်!)
၁၀. စာကြမ်းကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြင်ဆင်ပါ။ (Proofread)
Draft : When you’re inahurry, it’s very easy to leave words. (အလျင်လိုနေတဲ့အခါမှာ စကားလုံး၊ စကားလုံးတွေ ထားခဲ့ဖို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
Correction: When your’re inahurry, it’s very easy to leave out words.
(အလျင်လိုနေတဲ့အခါမှာ စကားလုံးတွေ ကျန်ခဲ့ဖို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်)
Richard Nordquist ၏ Top 10 Editing Tips for Business Writers ကို ကိုးကားရေးသားထားပါသည်။
Permalink Reply by Win Pyae Kyaw on October 21, 2013 at 11:17
Permalink Reply by ohnmar win on October 21, 2013 at 15:58
Permalink Reply by Soe Yarzar on October 21, 2013 at 23:41
Permalink Reply by tin nilar win on October 22, 2013 at 12:12
Permalink Reply by myatun on October 23, 2013 at 9:26
Permalink Reply by maythuzin on October 24, 2013 at 14:44
Permalink Reply by zawzawmyint on November 2, 2013 at 1:21
Permalink Reply by Moe Moe on July 16, 2014 at 14:01
Permalink Reply by Zin Maung Maung Soe on July 16, 2014 at 15:05
Permalink Reply by Lahkum Lahpai Zau Dim on July 16, 2014 at 15:57
was really useful ...thanks ...
Permalink Reply by januhline on July 17, 2014 at 14:22
I really like your post, and I would like to know I can or not to download your lessons
Permalink Reply by wut yi on December 15, 2014 at 10:40
By the way , kindly let me know how to save this lesson at my computer?